John Wayne: Maxaa ku dhacay Revolver, holster rig, 1972 Magazine Life?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » John Wayne: Maxaa ku dhacay Revolver, holster rig, 1972 Magazine Life?
Entertainment • Films • Investments • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Wareegto uu lahaa John Wayne oo uu xiddigga reer Galbeedku u adeegsaday dhowr filim oo dhowaan lagu iibiyay $ 517,500 oo ah shirkadda xaraashka Rock Island (RIAC). Lixda qori ee Colt ayaa markii hore qiimayn aad u hooseysa ka heshay shirkadda xaraashka, laakiin ka dib markii la aasaasay caddeyn toos ah, xiisaha ayaa si dhaqso leh ugu kordhay dadka wax aruuriya.
Wareega Colt Single Action Army waxaa arki kara Wayne oo isticmaala filimada sida goobtii run, diiqii Cogburn, Iyo Cowboys The, Iyo kuwo kale.
Waxaa ku jiray gantaalku wuxuu ahaa riiggii holland ee Wayne, dukumiintiyo badan oo xaqiijin ah, iyo nuqul 1972 ah Life Magazine
Joornaalka Nolosha ayaa Wayne ku yaal jaldiga isagoo xiran labbiska iyo qoriga labadaba.
“Suuqa wax uruuriyaa wuxuu la kulmay koboc aad u weyn dhowr nooc,” ayuu yiri Madaxweynaha RIAC Kevin Hogan. “Markaad isku darto laba nooc oo ka mid ah noocyadaas, xusuusta Hollywood iyo qoryaha aruuriyaha, runtii waxay marti qaadi kartaa tartan kulul. Aad ayaan ugu faraxsanahay xamaalkayaga waxaana ku faraxsanahay in iibsadayaashu nagu aaminaan inaan xaqiijinno waxyaabahan cajiibka ah. ”
Kobaca suuqa hubka ururiya ayaa sii wada muraayadaha tirooyinka iibka ee sarreeya ee lagu arkay qaybta tafaariiqda. Xaraashkii Wayne Revolve revolver lagu soo bandhigay ayaa lagu daray jadwalka RIAC si loo daboolo baahida sii kordheysa. Munaasabadda 3-maalmood ah waxaa ku jiray in ka badan 7,000 oo qoryaha aruuriyaha ah oo lagu daray farshaxanno millatari, qalab, farshaxan, waxaana la ogaaday in ka badan $ 8 milyan.